Maxaa Sababa Dhalinyarada inay Dalkooda ka Tahriiban ? (dhegayso) – Radio Daljir
Maxaa Sababa Dhalinyarada inay Dalkooda ka Tahriiban ? (dhegayso)
Maarso 1, 2018 6:22 g 0
Tahriibta ayaa ah Aafo Qaran waxaana Naftooda ku waayay dhalinyaro fabadan oo dalka ka tahriibay kuwaas oo qaar kood jaamacadaha dalka ka baxay.
Qoysas farabadan oo ay ubadkooda ka tahriibeen ayay arintan saameen dhaqaale iyo mid maskaxeedba ay ku yeelatay.
Hadaba Maxaa sababay in ay dhaliyarada Aqoonta leh iyo kuwa dalka ka shaqaystay in ay dalka ka tahriiban?
Su’aalahaasi iyo kuwo kale ayaan waydiinay Barqad Cartan Gurxan oo katirsan Hay,ada MRC oo ka sahaqaysa Arimaha ladagaalanka Tahriibta.
Wariye Maxamuud Cabdi Ibrahin ayuu uwaramay.
Madaxda dalka oo ka qayb-qaatey ol-oalaha nadaafadda ee Caasimadda